Ungazithola kanjani izaziso ku-KDE ezifana ne-Ubuntu | Kusuka kuLinux
Izaziso ezivela ku- I-Plasma en KDE Ziwusizo ngempela njengoba zihlanganisa izexwayiso ezithile nezithize ezingaba nentshisekelo kubasebenzisi.
Inkinga engiyibonayo ukuthi abanazo izinketho ezithile zokwenza ngokwezifiso, njengokukwazi ukuhambisa indawo lapho zikhonjiswa khona. Futhi uma benenketho, okungenani angikakutholi. Lesi isaziso sekhophi elijwayelekile:
Manje in KDE singaba nezaziso ezifanayo ngokubukeka kwalezo ze- Ubuntuusebenzisa colibri, okubuye kuthi, uma usivumela ukuthi siguqule ukuthi iyiphi ingxenye yesikrini abazokhonjiswa kuyo:
Okungenani ku Debianukufaka colibri kufanele baqhube umyalo:
Ungayisebenzisa kanjani i-Colibri?
Sivula Izintandokazi Zesistimu bese siya esigabeni Izaziso zohlelo lokusebenza nezesistimu, njengoba kukhonjisiwe esithombeni esingezansi:
Uma sesikhona, sizokwenza kanjalo Izaziso zeColibri:
Njengoba ukwazi ukubona, saziswa ukuthi uhlelo lwezaziso olusetshenziswayo yilelo I-Plasma, kanjalo colibri ngeke kusebenze size sikukhubaze. Ukukhubaza izaziso kusuka ku- I-Plasma, sichofoza ngakwesokudla kusithonjana endaweni yesaziso bese uchofoza Izintandokazi zezaziso:
Njengoba ukwazi ukubona esithombeni, zonke izinketho azithikhiwe, njengoba kufanele zibe ngale ndlela. Lapho nje samukela ushintsho, singaqala colibri.
Uma sifuna ukusebenzisa izaziso zePlasma futhi, kufanele simake kabusha zonke izinketho esizikhubaza ezintweni abazithandayo
Njengoba ukwazi ukubona esithombeni sakamuva, colibri ikuvumela ukuthi uguqule ukuthi iyiphi indawo yesikrini izaziso ezizobonakala.
Manje, kukhona engingakuthandi. Imvamisa, lapho kukhetho lwezaziso ze I-Plasma senza kungasebenzi Ukudluliswa kwefayela neminye imisebenzi, singabona ikhophi lefayela ewindini elivelayo, njengoba kukhonjisiwe ku lokhu okuthunyelwe. Noma kunjalo, lapho usebenzisa i- colibri, ayikho indlela yokubona isimo sekhophi yalawa mafayela.
Vele, lokhu kungenzeka ukuthi ngiphuthelwe ukwenza okuthile, njengokuqalisa kabusha iseshini noma okunye okufana nalokho, kepha okungenani akuzange kungisebenzele. Noma kunjalo, nansi indlela okufanele siyisebenzise uma sifuna ukusebenzisa lolu hlobo lwezaziso 😀
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso » Ungazithola kanjani izaziso ku-KDE ezifana ne-Ubuntu
Ngincamela i-plasma eyodwa.
Bangakwazi kanjani ukushintsha isikhundla sabo? Uvele uhudule izaziso njengewindi, yilokho kuphela.
Mmmm, kahle uma ngiyidonsa ibaguqula babe uhlobo lwePlasmoid futhi akuyona into engiyifunayo ...
Uma ungayihuduleli kuphaneli, kubukeka njengeplasmoid.
Uqinisile impela, izaziso azinakususwa, uma uzihambisa zihlala njenge-plasmoid futhi ayilungile. Sethemba ukuthi inguqulo elandelayo etholakalayo leyo nketho, njengoba bethembisa ushintsho olukhulu kuzaziso.
Uma ngikhumbula kahle, bengizothatha isaziso bese ngiyihudulela endaweni ebengifuna ivele kuyo. Futhi ngiyazithanda izaziso ze-KDE, wonke umuntu ubonakala ebazonda ngasizathu simbe.
kunjalo, ukuhudula nje kwanele ukukuhambisa.
Ngicabanga ukuthi yi-Ambiance 😀
Itimu kaPlasma yi-Ambiance.
I-Arrrgggggg… .elav, ebukeka kabi njengeGnome 2.x. Alikho icala, huh?
Ngamtshela ukuthi kwakuyi-GTK kakhulu enaleyo ngqikithi ye-xDDD
Eqinisweni ngiyayithanda i-plasma ambiance, ngiyithanda kakhulu i-xD
UCris Nepita kusho
Ingabe yi-KDE ngempela leyo?
Phendula uCris Nepita
I-athikili iyathakazelisa kepha ngidinga nje ukushintsha ingqikithi ukuze ngibe nezaziso ezimnyama ngandlela thile, futhi impendulo yamazwana wangaphambilini ilungile, yiKDE ehamba phambili kunazo zonke :).
Mm mnandi. Nginombuzo, ngishintshe izaziso zaba i-colibri, kepha manje angazi ukuthi ngikhombise kanjani ukudluliswa kwefayela neminye imisebenzi njengoba ngingenazo izaziso ze-plasma .. Ngabe kukhona umuntu ongangisiza?
Ngiyabonga, ilungile kimi !!!
Sawubona, uyihlola kanjani i-colibri kodwa angiyithandi manje.Ngifuna ukwazi ukuthi ngingaqalisa kanjani isazisi sami ebenginaso ngaphambili ku-kde yami.
Ngabe ikhona indlela yokuyishiya ukuze iziphathe njengewindi elivelayo kuhlelo lwe-colbrí nelinye ukuze isaziso sihlale? (ngokwesibonelo uma uthola i-imeyili noma bakhuluma nawe ngengxoxo)
I-LDD: I-Debian Cut, ukukhishwa okuzinzile kwe-distro nokugingqika
Kutholakalela ukulanda i-SolusOS Eveline 1.2